Garoowe:-"Somaliland Way Qaldan Tahay Haku Noqoto Meeshoodii,Waxaan Ku Dedaali Doonnaa In Aan Soo Celino Dhulka Puntland Ee Ay Somaliland Qabsatay"Madaxweyne Deni
Thursday January 10, 2019 - 12:28:45 in Wararka by Abdi A.
Hargeysa-(Caalami-News)-Madaxweynaha Cusub ee Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo wareysi gaar ah siiyay BBC ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin khilaafka dhanka xuduudda ee kala dhexeeya Somaliland iyo Golaha Iskaashiga Maamul Goboleedyada.
Somaliland ayuu sheegay in iyadu ay ku xadgudubtay dhul uu sheegay in Puntland ay leedahay. Wuxuu tilmaamay in maamullada ay dhistaan Gole uu sharci yahay dastuurkana uu dhigayo. Dowladda federaalka ayuu sheegay in uu kala shaqeyndoono wixii dib u dhis ah. Qaalib baaruud oo Garowe ku wareystay ayaa marka hore weydiiyay Waxa uu yahay hadafkiisa ugu weyn ee Puntland uu ka leeyahay?
Madaxweynaha ayaa mar wax laga waydiiyay Somaliland iyo waxa uga meel yaalla ayaa sheegay in aanay jirin wax Somaliland la yidhaahdan Soomaaliyana tahay hal dal oo lagu magacaabo jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Isaga oo arrintaasi ka hadlayaa waxa uu yidhi: "Somaliland way qaldan tahay. Haku noqoto meeshoodii. Deegaamada ay haysataa maaha kuwo ay iyagu leeyihiin. Waxaan ku dadaali doonnaa in aan soo celino dhulka Puntland ee ay Somaliland qabsatay. Waxaan ku baaqaynaa in ay degdeg isaga baxaan deegaamada ay haystaan” ayuu yidhi Madaxweynaha cusub ee maamulkaasi Garoowe loo doortay dorraad Salaasadii Siciid Cabdillaahi Deni.